Suuqgeynta Emailka ee Lambarada | Martech Zone
Sabtida, Maarso 10, 2007 Sabtida, Oktoobar 20, 2018 Douglas Karr
Saaxiibkeyga wanaagsan, Chris Baggott, wuxuu qarka u saaran yahay inuu soo saaro buuggiisa ugu horreeya, Suuqgeynta Emailka ee Lambarada. Chris ayaa buugga ku qoray Cali Iibka, saaxiibkay kale.
Chris waa rafiiq aasaasi ah Xaqiiqda, shirkadda aan u shaqeeyey oo ah Maareeye Badeecad. Blog-ka Chris (oo ay weheliyaan hoggaamiyeyaal kale oo cajiib ah iyo shaqaale) ayaa ku riixay ExactTarget tratosphere - loo magacaabay mid ka mid ah shirkadaha 500 ee shirkadaha ugu xawaaraha badan dalka.
Kaliya maahan inaan ku faraxsanahay la shaqeynta Chris ee ExactTarget, sidoo kale waxaan ku soo bandhigayaa buugiisa - anigoo la hadlaya otomaatiga iyo is-dhexgalka. Waxaan rajeynayaa inaan akhriyo buugga iyo sidoo kale xiisaha aan u arko naftayda oo daabacan! Waxaan u qoray oo aan joornaallo ku jiray, laakiin weligay buug ma ihi. Xaqiiqdii waxay igu riixday inaan bilaabo qorista naftayda, waxaan haystaa ilaa 75 bog oo ku saabsan wixii aan ku bartay sanadkeygii ugu horreeyay ee qorista. Waxaan u baahanahay inaan dib ugu noqdo, in kastoo!
Chris wuxuu kaloo aasaasayaa shirkaddiisa soo socota, Barnaamijka Compendium. Waxaan ku faraxsanahay inaan lashaqeeyo Chris bilowgan sidoo kale - waxaan fiidnimadi kuqaadanay inaan lahadalno kakanaanta kakanaanta iskuwareegyada isticmaaleyaasha iyo awood la'aanta akhristayaasha inay awood uleeyihiin inay si fudud kuhelaan waxyaabaha. Waxaad ku arki doontaa Compendium khariidada ugu dhaqsaha badan taas! Ma doonayo inaan wax badan ku sii daayo boorsada dusheeda, laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan arko aragtida Chris oo u rumowday sida Xaqiiqda sameeyey. Chris wuxuu hadda ka shaqeynayaa Compendium waqti buuxa. Waxaan hayaa wiil ku sii jeeda kulleejada, markaa waa inaan doorto wadada nabdoon oo aan la raaco shirkad mar hore qarxineysay!
Hore u sii dalbo nuqul ka mid ah Suuqgeynta Emailka nambarada! Emailku wali waa tikniyoolajiyad aan caadi ahayn oo leh tan ballamo badan. Si ka duwan tiknoolajiyada kale, emaylka ku saleysan rukhsadda ayaa wali safka hore kaga jira suuqgeynta 'riix'. Taasi waa, waxaad i siisay ogolaansho inaan kula soo xiriiro, waxaanan awoodaa inaan ku riixo xiriirkaas markii aan u baahdo. Telefishanka, Raadiyaha, Wargeysyada, RSS wali waxay ku tiirsan yihiin macaamiisha, macmiilka ama rajada 'ku habboon'. Emailku wuxuu ku soo kordhay qayb ka mid ah nolol maalmeedka annaga (Ma aqaan waxa aan sameeyay ka hor emaylka!) Oo wuxuu ku sii socon doonaa sidaas.
Ma sugi karo inaan helo nuqul buugga ah! Oo waxaa ka sii wanaagsan in la sawiro, Chris!
Tags: chris baggottEmail Marketingemaylka buugga suuqgeyntaemayl ku suuq geyn nambarada
Waxaan ku helay boggaaga anigoo raadinaya buuggan; ) Waxay umuuqataa inay mudan tahay in la iska hubiyo.
Waxaan rajeynayaa sidaas! Chris waa nin weyn waana Wacdiye Email ah oo ka hadlaya awoodda Email-ka adduunka oo dhan 5tii sano ee la soo dhaafay. Taladiisa waa la caddeeyay oo waa hore. Emailka waxaa loo eegay xoogaa sida tiknoolajiyada "shalay" laakiin waa wax walba laakiin. Suuqleyda waxay helayaan is-dhexgal emayl, bogag soo degitaan, diritaanno kiciyey, iwm.
Waan isku raacsanahay Weligaa ha dhayalsan awooda iimaylka si fiican loo meeleeyay ee liiska laba-doorka ah ee liiska macaamiisha.
Waa buug weyn buzz-na ka bilaabmay hareeraheena Atlanta. Doug, way fiicantahay inaad hesho balooggaaga oo waxaan kuugu rajaynayaa adiga, Chris iyo hogaamiyaasha fikirka ee bartilmaameedka saxda ah iyo Compendium. Dib ugu noqo Atlanta oo mar uun hilib ila qabo! Scott
Wanaagsanaa inaan kaa maqlo adiga waana ku faraxsanahay inaad i heshay! Waxaan rajeynayaa inaan mar kale kula kulmo mar dhow.
Dadka aan aqoonta lahayn: Qeexid6 waa mid ka mid ah hormuudka ka faa'iideysiga tikniyoolajiyadda Suuqgeynta. Haddii ay jiri lahayd hal shirkad oo aan la shaqeynayay taas oo la fahmay xayeysiinta dhexdhexaadka ah, otomatiga, iyo awoodda lagu xoojinayo awoodda mid kasta, waa Definition6.
Scott iyo kooxduba waa hogaamiyayaal fikir buuxa ka haysta warshadaha. Waxaan ku faraxsanahay inaan casho la aado Michael Kogon (CEO) iyo Scott hal habeen waxayna ahayd neef hawo nadiif ah. Waxaan ka soo duulay Atlanta anigoo buuqsan, oo aan la noolahay fikrado isla markaana aan ku faraxsanahay inaan ku soo laabto hagaajinta wax soo saarkeena.
Microsoft waxay u aqoonsatay Definition6 in ka badan iyo in ka badan xariifnimadooda iyo khibradooda. Waa koox cajiib ah! Markaan eegno 'Wakaaladda Mustaqbalka', waxaan u malaynayaa in Qeexitaanka 6 uu haddaba tusaale weyn yahay!
Waad ku mahadsan tahay joojinta iyo ii sheegista inaad halkan joogtay, Scott!